Ọnọdụ OnePlus 7 Zen na Ihe ndekọ ederede APK | Gam akporosis
Download ma wụnye OnePlus 7 Zen Mode na Screen Recorder APK maka ụdị OnePlus ndị ọzọ ebe a
El OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro Ha na OxygenOS 9.5 na-abịa, ụdị kachasị ọhụrụ nke usoro nhazi nke ụlọ ọrụ na-agbakwunye na ụdị ya. Ọ bụ ezie na ọ ka na-adabere na A gam akporo, na-eweta atụmatụ ọhụrụ nke na-erubeghị maka ekwentị ochie OnePlus. Abụọ n'ime njirimara ndị ahụ bụ Ihuenyo edekọ na Zen Mode.
OnePlus ekwenyela na Zen Mode ga-abịa OnePlus 6 na OnePlus 6T site na nwelite OTA. Enweghị oge maka mmelite ahụ, mana ị gaghị echere ogologo oge iji nweta atụmatụ ahụ na ụdị ochie.
AndroidPolice na-akọ na Njirimara Zen Mode na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ochie OnePlus ozugbo ị wụnye APK. Otu ihe a na-emetuta ihe ndekọ ederede. Yabụ ihe niile ị ga - eme bụ ibudata APK site na Mirror APK ma wụnye ha. Ná ngwụsị nke isiokwu anyị na-ahapụ njikọ. (Chọpụta: OnePlus 7 na OnePlus 7 Pro: nyocha miri emi)
Ọnọdụ OnePlus 7 Zen
Ha kwuru na ma ngwa agagh egosi na ngwa drawer. Iji chọta ha, ị ga-emeghe nke Ngbanwe ngwa ngwa na chọta Screen edekọ / Zen Mode. Mgbe ahụ ị ga-mkpa ịdọrọ taịl nile na ẹdude ndị. Nwere ike ịmalite ha si ebe ahụ, nye ikikere, ma hazie ha maka ojiji mbụ.
Dị ka nkwupụta ndị ahụ si kwuo, a nwalewo ihe ndekọ ihuenyo na OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T, na OnePlus 3T, ebe a kwadoro usoro Zen na-arụ ọrụ na OnePlus 6 / 6T na OnePlus 3T.
Cheta na: Biko mara na ngwa abụọ ahụ agaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ omenala ROM na ngwaọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Budata OnePlus 7 Zen Mode APK ebe a
Budata OnePlus 7 Screen Recorder APK ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Download ma wụnye OnePlus 7 Zen Mode na Screen Recorder APK maka ụdị OnePlus ndị ọzọ ebe a
Samsung Galaxy S11 dị ugbu a na mmepe n'okpuru aha 'Picasso'
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị dịkwa maka Kalinda na gam akporo